WordPress sy MySQL: Inona no isainao amin'ny teninao? | Martech Zone
Talata, Aogositra 26, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nisy resaka vitsivitsy tao amin'ny bilaogy momba ny haben'ny salan'ny lahatsoratra WordPress. Nisy hazavana nanjelanjelatra fa ny milina Search Engine ihany no handanjalanja ny fiantraikan'ilay voalohany x isan'ny endri-tsoratra, izay x tsy fantatra ankehitriny. Vokatr'izany, ny zavatra rehetra aorian'izay dia fandaniam-bola fotsiny.
Sary avy amin'ny wordle!
Somary saro-kenatra aho amin'ireo lahatsoratro bilaogy ka hanao fanadihadiana fanampiny aho ary hahitako raha toa ka misy ifandraisany amin'ny voatanisa ny teny. Tsy ho siansa loatra aho, fa te hijery lalina kokoa.
Ahoana no ahafahako mangataka WordPress amin'ny Word Count?
Ny MySQL dia tsy manana fiasa isa voaorina ho an'ny MySQL, fa toy ny fanontaniana rehetra mbola tsy voavaly, ny lehilahy hendry sasany eo amin'ny tontolon'ny bilaogy dia efa namaly ny fomba fampiasana MySQL hahazoana Word Count.
Ity misy fangatahana fanisan-tenin'ny mpanoratra novaina ho an'ny database WordPress:
AVY amin'ny `wp_posts`
Manana 'post_type` =' post 'ARY `post_status` =' hamoaka '
ORDER AMIN'NY `Daty_post_DESC
Tsy misoratra amin'ny 'haben'ny post tonga lafatra' aho amin'izao fotoana izao satria izay tena manome lanja amin'ny motera fikarohana Tsy ny fanisana teny fotsiny, fa ny isan'ny rohy mankamin'io atiny io. Raha manana lahatsoratra miisa 2,000 izay mahasarika ny fifandraisan'ny rohy ianao, dia ny haben'ny hafatrao dia 2,000 teny.
Tags: MySQLisan'ny tenySQLvoatanisa ny tenyWordPressteny
27 Aogositra 2008 à 2:21
Vokany, fandaniam-poana ny zavatra rehetra aorian’izay.
Eny, raha mbola manoratra ho an'ny Google ianao, fa tsy ny mpamaky anao… 😉
Aug 28, 2008 amin'ny 12: 26 AM
Misy plugin iray antsoina hoe "Blog Metrics" izay milaza aminao ny salan'isa teny ho an'ny lahatsoratra bilaoginao sns. Nahoana raha manandrana izany?
Sep 11, 2011 amin'ny 5: 54 AM
Manoratra aho mandra-pahazoako ny hevitro. Heveriko fa adala ny olona mividy votoaty dia voafono amin'ny fanisana teny.
11 Septambra 2011 à 6:28
Casey - Miombon-kevitra aminao tanteraka aho. Heveriko fa misy ny fahafahana mampiasa sary sy teboka mba hisarihana ny olona hamaky ny votoatiny, saingy manoratra aho mandra-pahatongan'ny heveriko fa vita ilay hevitra… ary miezaka aho tsy hanao mihoatra na tsy latsaka.